प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन तयार भए त ? - News20 Media
May 6, 2021 N20LeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन तयार भए त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी बैशाख २७ गते सोमबार संसदबाट आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिँदैछन् । उनलाई विपक्षीहरुले दबाब दिएर नभई यसपालि आफैले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि ओलीले एकाएक विश्वासको मत लिन लागेपछि सशंकित हुनेहरु धेरै छन् । विशेष गरी विपक्षीहरुले ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने नयाँ चाल चाल्न लागेको विश्लेषणसमेत गरिरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई भने विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने बताउँछन् । उनले मिडियासँग भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीले सके विश्वासको मत लिनुहुन्छ नसके राजीनामा दिनुहुन्छ’ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमै दलबलसहित गएर समर्थन मागेका छन् । यसबारेमा डा। भट्टराई भन्छन्, ‘यो संविधान हामीले मिलेर ल्याएका हौं । यसको संरक्षण गरौं भनेर सहकार्यका लागि कांग्रेस सभापतिसँग भेट्न गएका हौं । हामी राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा एक भएर उभिनुपर्छ भनेर कांग्रेससँग गएका हौं ।’
के भने त ओलीले देउवासँग ? भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत दिन सक्नुहुन्छ दिनुस् नदिए पनि मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेर आएको हुँ भनेर भन्नुभयो ।’
उनले कांग्रेससँगको सहकार्य विश्वासको मत लिनमात्र हैन राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सँगसँगै जान सकिने बताए । उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार हो कि हैन रु यो धारणा पनि बुझ्नु जरुरी छ । त्यो कुरा बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभएको हो ।’
उनले माधव नेपाल पक्षका २७ सांसदले राजीनामा दिनेबारेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरुका धेरै सदस्यहरु उहाँकै पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँका केही साथीहरु हामीसँगै संवादमा हुनुहुन्छ ।’
ओलीले विश्वासको मत लिन लागेपछि विपक्षी दलहरु एकढिक्का हुने प्रयासमा छन् । तर ओलीले विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिएर फेरि अर्ली इलेक्सनमा जाने धारणा बनाएको डा. भट्टराईको भनाईबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
एमाले उच्च स्रोतका अनुसार निकै दबाबमा रहेका ओलीले नेपाललाई भेट्न बालुवाटार बोलाएका थिए। तर नेपालले अहिले भेटघाट गर्नुको औचित्य छैन भन्ने जवाफ फर्काउँदै पहिला फागुन २८को निर्णय सच्याएपछि मात्रै कुराकानी तथा भेटघाट गरौँ भनेका थिए। जवाफमा ओलीले यो विषयमा भेटेरै कुराकानी गरौँ भन्दै फेरी पनि भेटघाटको प्रस्ताव राखेका थिए।
‘ओलीले फोन गर्नुभएको रहेछ तर नेपालले बालुवाटार आउँदिन र अहिले भेटघाटको औचित्य छैन भन्नुभएछ’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नै नेताहरूले नेपाल पक्षसँग कुराकानी गरेर विवाद मिलाउन दबाब दिएपछि ओलीले नेपाललाई फोन गरेका थिए।
ओलीजीले फोन गरेर भेटौँ भनेका थिए मैले फागुन २८गते बसेको बैठकले के के निर्णय गरेको छ त्यसलाई सच्याउने र २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्था पार्टीको बैठक राखौँ जे जे निर्णय गर्ने हो त्यहीबाट गरौँ भनेर भनेको छु फेरी पनि भेटेरै कुराकानी गरौँ भनेका थिए फोस्रो बसाई काम छैन भने’, नेपालले आफू निकटका नेताहरूसँग भनेका थिए। दुई दिन अघि गरिएको फोन संवादपछि पुन अर्को फोन संवाद भने भएको छैन।
सभामुख सापकोटाको कोरोना रिपोर्ट के आयो ?
देशभरिको तापक्रम वृद्धि, पहाडका केही भूभागमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना
सलाम छ बिपत्तिमा सहयोग गर्ने नेपाली मन। कहिले सकिएला सरकारको गनगन ? सम्मान गरौँ ।